Macalin Asad Qasim: Maamulka magaalada Drammen iyo kan gobalka Buskurud waxay dayaceen caruurta ajaaniibta ah - NorSom News
Macalin Asad Qasim: Maamulka magaalada Drammen iyo kan gobalka Buskurud waxay dayaceen caruurta ajaaniibta ah
Asad Qasim oo ah macalin soomaali ah oo Elektro, Data & Elektronikksystemer ka dhigaa iskuul ku yaalo magaalada magaalada Drammen ee gobalka Buskurud ayaa maqaal kooban oo mug weyn kusoo daabacay wargeyska caanka ah ee Drammens Tidende. Asad ayaa maqaalkiisa uga hadlayo dhibta waxbarashada ka haysato caruurta ajaaniibta ah guur ahaan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Drammen.
Drammen waxaa lagu tiriyaa inay tahay mid kamid ah magaalooyinka ay dadka ajaaniibta ama qoxootiga ah ay ugu badanyihiin deegaan ahaan wadanka. Qaarkood magaalada ayay ku dhasheen oo xuduntooda ku aasantahay, halka qaar kalena ay magaalada soo dageen iyaga oo dad waaweyn ah.
Ajaaniibta magaalada degan waxay dhalaan caruur si lamid ah sida dadka Norwiijiga ah. Balse ajaaniibtu waxay ka dhalaan caruur tiro ahaan badan, una baahan awood iyo howl dheeri ah sidii waxbarasho loogu hagi lahaa ama bulshada inteeda kale loo dhaxgelin lahaa.
Santarka magaalada Drammen iyo maqaaxiyaha ay leeyihiin ajaaniibtu, waxaan badanaa ku arkaa dhalinyaro ajaaniib ah oo meeshan taagtaagan, halkii ay iskuul ka aadi lahaayeen oo wax ka baran lahaayeen. Qaarkood waxaaba laga yaabaa inay ku howlanyihiin waxyaalo sharci daro ah, oo mustaqbalkooda bur-burin kara.
Qaar kamid ah dhalinyaradaas oo aan la sheekeystay waxay ii sheegeen inaysan wax hami ah ka laheyn inay waxbartaan ama ay iskuul dhigtaan. Sababta arintaas keenaysana waxay badanaa ku lugleedahay dhibaato xaga qoyska ah, iyo badanaa waalidiin aan iyagaba horey wax usoo baran. Qaar kalena waxay waxayba ku adkeysanayaan in waxbarasho kasta iyo iskuul kasta oo la dhigtaa aysan wax faa-iido ah laheyn oo waqti lumis tahay, maadaama ay ogyihiin inay adagtahay in hadhow mustaqbalka ay shaqo ku helaan waxii ay barteen.
Inta badan dhalinyaradan dugsiga sare ayay ka dhaceen, aqoon kale oo ay nolol ku sameystaana ma lahan. Niyadna uma hayaan inay nolosha horey usii socdaan, waxay u badantahay ugu danbeyn inay NAV macaamiil ka noqdaan.
Waxaan anigu iswaydiiyaa in maamulka kommunaha Drammen ama kan gobalka Buskurud ay qabteen shaqadii looga baahnaa si caruurtaas khatarka ku sugan loo bad-baadin lahaa. Ma jiraa wax go-aan ah oo laga soo saaray si dhalinyaradan looga bad-baadin lahaa inay mustaqbalka noqdaan kuwo Kriminell ah.
Waxaan ka shaki qabaa oo aan aaminsanahay in maamulka magaalada iyo kan gobalkaba aysan qaban shaqadii looga baahnaa oo ku aadaneyd sidii loo bad-baadin lahaa caruurtan ku socoto wadada qaldan. Waxaan fikirkeyga la qaybsanaa dadka degan magaalada Drammen oo dhan, waxaan xiiseynaa inaan ogaado fikirkiina ku aadan arintan. Dhamaanteen waxaa xil inaga wada saaranyahay sidii aan magaaladeena uga dhigi laheyn mid fursad siisa shaman dadka degan oo dhan.
Xigasho/kilde(maqaalka originalka ah): DRAMMENS TIDENDE
Previous articleCiise Midnimo oo gool dhaliyay, guulna ku hogaamiyay KFUM
Next article225 kiilo oo khaad ah oo lagu qabtay Gardermoen